Luul soodhada Caustic
Kaalshiyamka Kaalshiyamka 295L / kg
Soda ash cufan
Sodium ammooniya sulfate
SLS 92% 94% sodium lauryl sulfate K12 budada iyo nee ...
Khamriga Ethyl 96% 99% iyo IPA 99%
TCCA 90 acid trichloroisocyanuric 90%
Daaweynta Biyaha Alunimium Salphate
ACID ACETIC ACID / CARBOXYLIC ACID
POLYVINYL cusbi chloride
KHATARTA PVC EE SUUQA
Mustaqbalka PVC ayaa sii waday inuu dhaco, taas oo wadata barta inay dhacdo. Dhinaca shisheeyaha, hoos u dhacii ugu dambeeyay ee suuqa saliidda ceyriin iyo saameynta dhacdooyinka caafimaadka bulshada ee shisheeyaha, baahida loo qabo PVC ayaa si weyn hoos ugu dhacday, ...
Sodium cyanide waa iskudhis aan dabiici ahayn, waa biyo adag oo biyo ku milmi kara. Cyanide wuxuu leeyahay xiriir aad u sareeya ee biraha, sidaa darteed cusbadaani waa mid aad sun u ah. Si fudud loo xalin karo, oo leh ur yicib qadhaadh oo daciifa. Ku dhex milma wakhtiga
Saameynta ay ku yeelatay dayactirka xarumaha shirkadaha, qiimaha aashitada gudaha wuxuu muddo gaaban u kacay marxaladda hore, koror ku saabsan 50 / tan, laakiin suuqa hadda jira guud ahaan wali wuxuu muujinayaa xaalad ka weyn ...
Bilowgii toddobaadkan, waxqabadka suuqa hydrogen peroxide waa la isku qasay. Woqooyiga waxay ahayd goos goos, koonfurna waxay sugaysay inay aragto dhamaadka. Warka keena iyo baahida ayaa aad u urursanaa. Xakamaynta ...
Qiimaha dambaska soodhaha ayaa asal ahaan deggan toddobaadkan. Qeybta hoose ee biyaha waxay inta badan ku saleysan tahay wax soo iibsi, macaamilka dhabta ahna waa mid ka dabacsan. Waxaa la filayaa in qiimaha ash ash lagu hagaajiyo gudahood ...
Cinwaanka: No.1023, 10F, Bldg B, HOPSON Junjing Square, wadada 1aad Hangyun, TEDA, Tianjin 300457, Shiinaha.
Fakis: + 86-22-66863746-608
Right Xuquuqda daabacaadda - 2018-2022: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay.